Ungalokothi Uthi Ufa: Ama-Euphmisms for Death
"Khawucinge ukuba ngubani ongasayithenga kwiWal-Mart"
UJohn Algeo uthi: "I- Euphemism idla ngokuqhelekileyo, xa sifanele sijamelane neenkcukacha ezincinci zobomi bethu." Apha sibheka ezinye 'zentetho yokuthula' eziqeshwe ukuphepha ukujongana nentloko kunye nokufa .
Naphezu koko uye wakuva, abantu abafane bafe kwizibhedlele.
Ngelishwa, ezinye izigulane "ziphelelwa yisikhathi" apho. Kwaye ngokubhekiselele kwiirekhodi zebhedlele, abanye bafumana "ukungalunganga kweengxaki" okanye "iziphumo zokunyamekela isiguli." Nangona kunjalo, loo miphumo ayikwazi ukudideka njengoko isigulane "esiphumelele ukuzalisekisa ukufaneleka kwayo." Uninzi lwethu, ndicinga, ngandlela-fileyo ndingafa kunokuba ndilahle phantsi kwicala ngale ndlela.
Ewe, mhlawumbi ungafi ngokukodwa.
Singaba nokukulungele "ukudlulela," njengeendwendwe zokutya ezidlulayo. Okanye "hambani," njengoko sifanele sihambe emva kobusuku. (Awukho "nathi", imikhosi yethu iya kuthetha.) Ngaphandle kokuba, kunjalo, sininzi kakhulu ukusela, kwaye ke sinokuphela nje "silahlekile" okanye "silele."
Kodwa utshabalalise ingcamango.
Kwinqaku ethi "Ukunxibelelana Ngokufa Nokufa," u-Albert Lee Strickland kunye noLynne Ann DeSpelder bachaza indlela omnye umntu osebenza esibhedlele waphoxisa ngayo igama elinqatshelwe.
Ngenye imini, njengeqela lezonyango lihlolisisa isigulane, umfundi wangena emnyango ngolwazi malunga nokufa kwesinye isiguli. Ukwazi ukuba igama elithi "ukufa" laliyi-tab kunye nokufumana indawo engafanelekanga, umfundi wangena emnyango waza wathi, "Khawucinge ukuba ngubani ongeyothenga kwiWal-Mart." Kungekudala, eli binzana laba yindlela eqhelekileyo yokuba abasebenzi baxelele iindaba zokuthi isiguli sife.
( Ukufa, Ukufa, kunye nokuHlekwa , ku-Inge Corless et al. Springer, 2003)
Ngenxa yokuba izikhwepha ezinamandla zijikeleza isihloko sokufa kwenkcubeko yethu, izibalo ezininzi zokufa ziye zavela kwiminyaka. Ezinye zezo ngqamaniso, ezinjengeemigqaliselo ezinokuthi ziphakanyiswe ngasentla, zithathwa njenge-euphemisms. Bakhonza njengezentetho zokuthula ukuze basincede sigweme ukujongana nentloko kunye nezinto ezinzima.
Izizathu zethu zokusebenzisa iifommisms ziyahluka. Singashukunyiswa bubele-okanye ubuncinci. Ngokomzekelo, xa uthetha ngo "oshonile" enkonzweni yomngcwabo, umphathiswa ukhululeke kakhulu ukuba athi "ubizwa ngokuba ngumzi" kunokuthi "utshaye uthuli." Kwaye ininzi lethu, "ukuphumla ngoxolo" kuzandile ngakumbi kududuza kunokuba "uthathe utyhuzo oluthile." (Phawula ukuba okuchasene ne-euphemism yi- dysphemism - indlela enobungozi okanye engakumbi yokuthetha into ethile.)
Kodwa iifommisms azihlali ziqeshwe rhoqo. "Isiphumo esiphumeleleyo siphumo" esibhengeziweyo esibhedlele singabonakalisa umzamo obalaseleyo ukuguqula ukungaphambuki komfundi. Ngokufanayo, kwixesha lemfazwe isithethi sikaRhulumente sinokuthi singabonakalisa "umonakalo wokubambisa" kunokuba simemezele ngokucacileyo ukuba abahlali babulawe.
"U-[E] uphemism akakwazi ukurhoxisa ukufa nokufa," kusho uDorothea von Mücke kwisicatshulwa sombhali waseJamani uGotthold Lessing. Nangona kunjalo, "kunokuthintela ukujamelana ngokukhawuleza, ukungena ngokukhawuleza, ukungaxhatshazi nokufa njengokwenene, njengokuchithwa nokungahambelani" ( Umzimba kunye nombhalo kwiXeshumi elinesibhozo , 1994).
I-Euphmisms isebenza njengezikhumbuzo zokuba unxibelelwano (phakathi kwezinye izinto) umsebenzi wokuziphatha.
Strickland kunye neDeSpelder icacisa ngale ngongoma:
Ukuphulaphula ngenyameko indlela ulwimi elisetyenziselwa ngayo lunika ulwazi malunga nesimo sengqondo sesithethi, iinkolelo kunye nesimo sengqondo. Ukuqonda izichazo , izibhengezo kunye nezinye iilwimi ezisetyenziswa ngabantu xa uthetha ngokufa nokufa kukuvumela ukuqonda ngokubanzi ulwahlulo olubanzi malunga nokufa kunye nokukhuthaza ukuguquguquka kokuthintana.
Akungabazeki ukuba iifommisms zifaka isandla kwisityebi seelwimi . Ukusetyenziswa ngokucamngca, kunokusinceda sikwazi ukulimaza iimvakalelo zabantu. Kodwa xa zisetyenziselwa ukunyaniseka, iifommisms zingenza ihavu leenkohliso, ubuqhetseba bamanga. Kwaye oku kunokwenzeka ukuba sihlale sisinyanisekile emva kokuba sithenge iifama, sidibene kwii-chips zethu, sinikwe umoya, kwaye ngoku, safika ekupheleni komgca.
Olongezelelweyo Ngeelwimi IiTaboos
I-Allot, A Lot, kunye ne-Alot
Iinkcukacha ngokukhawuleza malunga neAlfabhethi yesiNgesi
Ukusebenzisa imizobo kunye neengqungquthela zokuNcedisa ukuBhala kwethu (Ingxenye 1)
I quotation kunye ne Quote
IsiNgesi njengoLwimi lwehlabathi
Iimpembelelo zokuQothulwa kobuNtu kuBantwana basinde
Iingcebiso Zokudoba Ukubamba Mangrove (Grey) Snapper
Uxinzelelo luyimpembelelo enkulu yobuhlanga kuBantwana noLutsha
I-Top 3 Main Linebacker Izithuba
Inkcazo ye-Double kwi C, C ++ kunye neC #
Uphila Kwizendalo Ezifudumeleyo
Yiyiphi iFulgurite kwaye Yenza njani enye
Uhlobo lwe-Hurlyburly Uhlalutyo lukaDavid Rabe lwe-Darkly Comic Drama
Uyijonga njani umgca weengqungquthela zesiLatini?